Indlela Yokufudumala Uhlelo Lokuqeqesha Ukuqina - Indlela Makia
Ukubaluleka Kokufudumala KuPhakamiso LokuQinisekisa UkuQinisa Kwezinga Eliphakeme
Yini efika engqondweni uma ubona noma uzwa igama elithi "ukufudumala"?
Uma unenkinga yokuzibuza ukuthi ukhona yini namhlanje noma kungcono ngaphandle, kufanele wazi ukuthi awodwa. Ukufudumala kuvame ukuzwa ukuthi kuyinto enhle kakhulu, futhi empeleni akusizi ngalutho, ngakho abantu abakwenzi ngokwanele. Njengoba sinezimo ezifanayo esikhathini esidlule, senze imizamo ekhethekile yokwenza ukufudumala kwe-Method Makia-ups, noma indlela yokuPhuthukisa njengoba siyibiza, okukhangayo ngisho nomgqugquzeli womzimba okhuthele kakhulu wokuthi abantu ngeke bawunaki - drugs for anxiety. Kodwa ngaphambi kokwenza noma yikuphi okunye, ake sigxile kumbuzo oyisisekelo ohlobene nokufudumala Iyini isizathu sokwenza lokho?
Cabanga ulele njengengane. Ngokungazelelwe, izibani ziyaqhubeka, futhi othile uphonsa phansi ifomu lakho lokubuyisela intela phambi kwakho ukugcwalisa lapho. Khona-ke, futhi ngesikhathi esifanayo, ucelwa ukuba usho ukuthi isimo sezulu seLwesibili sasinjani, ukuthi amagama omkhulu kanini nogogo nomkhulu wakho, futhi unqume ukuthi yimuphi umshuwalense ohlukile wesithupha onika ukuthi usulungele ukwamukela. Ungaba nakho konke lokho okulawulwayo? Into efanayo eyenzeka emzimbeni wakho uma uyiphoqa ukuba uhambe ngaphandle kokufudumala kusengaphambili. Umzimba wakho uvuswe ngokuzumayo, futhi uthumela ubuchopho bakho umyalezo, kodwa konke kwenzeka ngokuhamba kancane. Yonke iseli emzimbeni wakho ithi "Kwenzekani manje?" Ingxenye yomzimba wakho ihlasela ama-brakes, enye i-panic, futhi yonke into isuke ikhuni. Uma ukucindezeleka kungeniswa ngokuzumayo, kodwa kusezingeni eliphezulu, umzimba awunayo isikhathi sokusheshisa ukujikeleza kwakho, futhi umphumela ngokwanele ukukhathala okusheshayo kunokujwayelekile.
Ngempela, igama elifanele kakhulu kunokufudumala-up livusa. Uhlobo olufanele lokuvusa luza umzimba wakho ukulungele ukuya. Amangqamuzana omzimba alungiselela ukwenza isivumelwano, ukujikeleza kwegazi kuphumelela ekususeni ama-acids, izicubu ezixhasayo / ezihlangene zilungele ukucindezeleka. Isibani sibheka phezulu, umzimba wakho uvukile, futhi ulungele ukwenza okugcwele.
Kubaluleke kakhulu ekuvukeleni isimiso sezinzwa, amalunga, kanye nezicubu ezixhasayo / ezixhumeneyo ukuletha esimweni sokulungela. Lokhu kuqinisekisa ukusebenza kahle nokuphepha okungcono kakhulu. Kukholelwa ukuthi injongo elula yokwelula ukufudumala imisipha ukuze ugweme izicubu ezithandwayo kanye ne-sprains. Eqinisweni, umzimba uphulukisa izicubu ezithintekayo kangcono kakhulu kunamalungu awonakele kanye nezicubu ezixhasayo / ezihlangene. Lapho isimiso sezinzwa "silele", imisipha yakho ijwayele ukulimala, ikakhulukazi ngesikhathi sokuqeqesha okubandakanya ukunyakaza okusheshayo. Ngokuqinisekile, ukufudumala imisipha yakho kubalulekile ukugwema ukulimala nokuqinisekisa ukuphumelela kokuqeqeshwa kwakho. Kubalulekile ukulalela umzimba wakho ukuze imisipha "ingesabi" futhi "ishaye amabhuleki" ngaphambi kokuba kuqeqeshwe ukuqeqeshwa. Ukugqugquzela ukunwetshwa kufanele futhi kwenziwe kancane kancane ekuqaleni futhi kuphela lapho ukufudumala kwenzeka okwethenjelwe kungadluliselwa ukuze kufakwe izikhundla ezidlulele. Iphunga lihle, kodwa ukuvusa kuthathwa ngokweqile kungenasidingo sokuzivocavoca okuvamile.
Umzila we-Arousal Wendlela kaMakia
Ngaphambi kokuba uqobo lweMet Mak Makia luqale, isimiso sokuvusa senziwa, futhi sikhulisa umzimba wakho ukulungele uMet Makia uqobo.
Ngakho Yini enhle kakhulu mayelana ne-Prehab? Yiqiniso, into ebaluleke kakhulu ukuhambisana nomgomo. I-Prehab yethu yakhiwa ukunyakaza okujabulisayo, okuhlakaniphile nokusebenzayo okuvusa zonke izingxenye zomzimba wakho ngokuqondile embonweni wokuqeqesha umzimba. Noma kunjalo, sibheke kancane kancane. I-Prehab yethu ihlanganisa ama-squats anempilo "enempilo" enenzuzo emhlane wakho namadolo, ama-wrists, i-elbow, nama-shoulder exercises okuqinisa umzimba wakho ukulungele ukunyakaza okunamandla okudinga umzimba. Iphakheji enhle ye-compact elula futhi esheshayo yokwenza ngokulandela ividiyo.